ठेक्कामा ‘म्याचफिक्सिङ’ : ५५ अर्बको ठेक्का मिलेमतोमा - CIJ Nepal
नेपालमा ६ जना ठेकेदारले सिङ्गो निर्माण प्रशासन र राजनीतिक क्षेत्रलाई मिलाएर राखेका छन् । ठूल्ठूला ठेक्काहरूमा उनीहरूबीच कसरी हुन्छ मिलेमतो ? प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले तयार गरेको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको खुलासा ।
-रुद्र पंगेनी: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि
पञ्चायतकालको कुरा हो । जुम्लाका सिडिओले घोडा खरीद गर्ने सूचना निकाले । सूचनाको मापदण्डमा ‘घोडाको निधारमा तारो भएको अर्थात् तिल्के, ढाडमा पहेंलो पाटा, पुच्छर छोटो भएको, खुरमा छिर्केमिर्के रङ भएको हुनुपर्ने’ उल्लेख थियो । सिडिओ कार्यालयको सूचना हेरेर जुम्लाका घोडाधनीहरू घोडा बेच्न पाइने भयो भनेर दंग परे । सिडिओ कार्यालयमा घोडा देखाउनेको ताँती लाग्यो । कार्यालयका कर्मचारीले मापदण्ड हेर्दै हरेक घोडाको मूल्यांकन गरे । तीमध्ये एउटा घोडामात्रै सूचना अनुसार योग्य ठहरियो । त्यो घोडा थियो, जिल्ला पञ्चायत सभापतिको ।
२०७१ भदौमा संसदीय समितिमा सरोकारवालासँगको छलफलमा विदेशी निर्माण कम्पनीलाई ६० करोड रुपैयाँको थ्रेसहोल्ड (६० करोड रुपैयाँ भन्दा तलका ठेक्कामा नेपाली व्यवसायीबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने) राख्ने भन्नेमा सबै सांसद् सहमत थिए । यसैबीच ठेकेदारहरूको यो समूहको प्रायोजनमा ७ जना सांसद् र संसद्का ६ कर्मचारीलाई मलेशिया र सिंगापुर ५ दिन (भदौ १५ देखि २० गतेसम्म) घुम्ने व्यवस्था मिलाइयो । करीब २५ लाख भ्रमण खर्चमध्ये आधाजति ठेकेदारको क्षमता विकासका लागि हरेक ठेक्का अंकको ०.१० प्रतिशतबाट निर्माण व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा व्यवस्थापन कार्यान्वयन समितिमा जाने कोषबाट व्यवस्था मिलाइएको थियो ।
उच्च सूत्रका अनुसार, यस्तो ‘प्याकेजिङ’ पछि कुन ठेक्का कसले लिने भन्नेमा यी ‘ठूला’ बीचमा सहमति हुन्छ । सोही अनुसार ठेक्का जसका लागि तय भएको हो उसले लागत अनुमान भन्दा अलिक थोरै अर्थात् १ प्रतिशत भन्दा न्यून अङ्कमा ठेक्का हाल्छ । अनि प्रतिस्पर्धा देखाउनका लागि ठूला ठेकेदार समूहका अन्य सदस्यले ठेक्का अंक भन्दा बढी अङ्कमा टेण्डर हाल्छन् । परिणाम उनीहरूले सहमति गरेकै व्यक्तिले ठेक्का प्राप्त गर्छ । “ठेक्का सूचना फगत प्रक्रिया पु¥याउन मात्रै निकालिन्छ । ठेक्का पाउने व्यक्ति÷कम्पनी पहिले नै तय भइसकेको हुन्छ” महासंघका एक पदाधिकारीले नाम नबताउने शर्तमा भने, “पछिल्लो अढाइ वर्षमा मात्रै लगभग ५५ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का यसैगरी लागेको छ ।”
यो कामले सार्वजनिक खरीद ऐन र नियमावली छलेर सीमित व्यक्तिलाई फाइदा पु¥याइरहेको छ । प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा कम लागतमा परियोजना सम्पन्न गर्न दिइँदैन । त्योभन्दा पनि गम्भीर विषय ठूलो ठेकेदारले प्रतिस्पर्धा गर्नु नपर्ने हुँदा लागत अंकमै ठेक्का पाइरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । (हे. तथ्याङ्क) यसो गर्दा ती ठेकेदारलाई प्रत्येक परियोजनामा ठेक्का अंकको अतिरिक्त वा प्रतिस्पर्धा गर्नु नपरेकोले २५ प्रतिशतसम्म लाभ हुनसक्छ । यो ठूलो रकम प्रयोग गरेर राजनीतिक तहदेखि कर्मचारीतन्त्र सबैलाई प्रभावित गर्ने क्षमता यी ठूला ठेकेदारहरूमा रहन्छ । अहिले त्यही भइरहेको छ ।
admin January 15, 2018	nepali-posts One Comment »
ठेकेदार जनप्रतिनिधि, विकास योजना अलपत्र
One Comment to ठेक्कामा ‘म्याचफिक्सिङ’ : ५५ अर्बको ठेक्का मिलेमतोमा
यिनै ठेकदारकै कारण गौचनको हत्या भएको थियो